Askeri Araç ve Mühimmat Yüklü Tren 10 Gündür Bilecik Garı'nda Bekliyor (Video) - RayHaber
[15 / 10 / 2019] မီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြပွဲ 14-16 ကိုskပြီလ 2020 တွင်အစ်စကစ်ဟီရီတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်	26 Eskisehir
[15 / 10 / 2019] အမေရိကန်ပြီးနောက်တူရကီအတွက် Register လုပ်ဖို့ triple Track လျှောက်လွှာ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[15 / 10 / 2019] TCDD မှ Ankara စက်ရုံအရေအတွက်ပြောင်းလဲနေသည်	06 တူရကီ
[15 / 10 / 2019] Gebze Darıcaမြေအောက်ရထားကိုဝန်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းသော်လည်း Ama ကို	41 Kocaeli
[15 / 10 / 2019] Sakarya Tram Project ၏နောက်ဆုံးအခြေအနေမည်သို့ရှိသနည်း။	54 Sakarya
[15 / 10 / 2019] ဆမ်ဆန်ရှိပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	55 Samsun
[15 / 10 / 2019] စက်လှေကားများ Ankara Metro Stations တွင်အလုပ်မလုပ်	06 တူရကီ
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး11 Bilecikစစ်ရေးယာဉ်များနှင့်ကျည်ရထား 10 Bilecik နေ့စောင့်ဆိုင်းဘူတာ (ဗီဒီယို) တွင်တပ်ဆင်ထားသည်
စစ်ရေးယာဉ်များနှင့်ကျည်ရထား 10 Bilecik နေ့စောင့်ဆိုင်းဘူတာ (ဗီဒီယို) တွင်တပ်ဆင်ထားသည်
27 / 07 / 2016 Levent Ozen 11 Bilecik, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ဗွီဒီယို 0
စစ်ရေးယာဉ်များနှင့်ကျည်ရထား 10 Bilecik နေ့များတွင်တပ်ဆင်ထားသည်ဘူတာစောင့်ကြို: တူရကီကနေအစ္စတန်ဘူလ် Bilecik မှသူ၏လမ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုပဏာမညဥ့်ကုန်စည်စစ်ရေးယာဉ်များရထားနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်က 10 ရက် garda ဘူတာစောင့်ဆိုင်းအတွက်ရပ်တန့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
စစ်တပ်ကယာဉ်တူရကီ Mamak xnumx'inc ယန္တရားခြေလျင်တပ်မဟာတပ်မှူးသတ်မှတ်ထားသောကုန်တင်ရထားထဲကအာဏာသိမ်းထိုညဉ့် 28 Bilecik ဇူလိုင်လအတွက်ကြိုးပမ်းလမ်းယူ 1 ဇူလိုင်လကနေအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တပ်မတော်စစ်ဌာနချုပ် xnumx'inc နှင့်တူရကီအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းမှ '' t ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအဖွဲ့များအားဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ သံချပ်ကာယာဉ်များ 15, 16 စစ်တပ်ထရပ်ကားမရှိအပြင်ဘက်စစ်တပ်အရာရှိများစက်လုပ်သမားသင်ယူရှိကွောငျးမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ကုန်တင်ရထား၏ 16 ရှိရာခဲယမ်းမီးကျောက်လှည်းခြေရာခံ။ 20 ကြေညာချက်ဇူလိုင်လအတွင်းထိန်းသိမ်းခံခဲ့ကြသူအင်ဂျင်နီယာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ Garda စစ်ရေးယာဉ်များကျင်းပများနှင့်သတ်မှတ်ထားသောလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်အတူကြောင့်ကုန်တင်ရထား ပတ်သက်. အစိုးရရှေ့နေရဲ့ရုံးကအစပျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးထားတော်မူ၏။
အစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာ '' Çemberyol '', '' Çemberray '' နှင့် system နှင့်အတူ '' trans ဆိုတဲ့ '' အဆိုပြုထားဖြေရှင်းချက် 26 / 07 / 2012 Urbanists ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Ahmet Vefik Alba, 'Çemberray' ',' 'Çemberyol' 'ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်' နှင့် '' trans ဆိုတဲ့ '' စနစ်ကမြို့ပြယာဉ်ကြောနှင့်အတူအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်ပြေလည်နိုင်ပါတယ်။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Alba သည်, မိမိစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြတ်သန်းနေ့က Boot တက်, အဘီး၏အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ရိုး၏ non-linear အရှေ့-အနောက်ဘက်ဦးတည်ချက်နှင့်အတူမြို့ circles ကြောင့်မြို့ပတ်ရထားရထားလမ်းနှင့်တာယာစနစ်များကိုပိုမိုလေးနက်၏အစ္စတန်ဘူလ်စားပွဲပေါ်မှာထူထောင်မရချိတ်ဆက်ပါ။ အဆိုပါ Golden Gate တံတားတစ်ဘက်စုံသုံးဖြစ်ပါတယ်အောက်ရှိ Bosphorus နှင့်တာယာ၏တောင်ဘက်ရထားလမ်း, ဘီးတပ်ယာဉ်များတည်ဆောက်လျက်ရှိပြွန်, ကဆက်ပြောသည်, စစ်ပွဲအခြေအနေများမှတက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုပြင်, ငလျင်, မတော်တဆထိခိုက်မှု, အဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းလျှင်နှစ်ဦးစလုံးတံတားများ၏ '' Yüzertüp '' ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကျင်းပလိမ့်မည် နှင့် ...
ရုရှားရဲ့ Orenburg မြို့မီးရထားဘူတာရုံ၏သံသရာအတွက်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ပေါက်ကွဲ 10 / 10 / 2012 ခဲယမ်းမီးကျောက်များသံသရာ Orenburg, ရုရှားအတွက်မီးရထားဘူတာရုံမှာပေါက်ကွဲခဲ့။ ခဲယမ်းမီးကျောက် loaded လှည်းရထားပေါက်ကွဲမှုအတွက်စစ်တပ်စမ်းသပ်လယ်ကွင်း 40 ခုန်တက်။ မြေတပြင်လုံးဒေသဖုံးအုပ်မီးခိုးတိမ်ဖန်တီးသောအခါတစ်ဦးကအလွန်အစွမ်းထက်ပေါက်ကွဲမှုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်, အနီးတစ်ဝိုက်၌နှစျမြို့များမှလူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရွှေ့ပြောင်းခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ရုရှားအရေးပေါ်အခြေအနေများန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကြေညာချက်မှာတော့မြို့၏ "သံသရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည်။ sol-Lipetsk အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအသွားအလာမှအပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ ရထားဘူတာရုံထဲမှာလက်နက်ခဲယမ်းလှည်းပေါက်ကွဲမှုမော်စကိုအချိန် 10.57 အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "။ လည်းထိခိုက်နစ်နာခဲ့ကြသည်ထုတ်ပြန်ချက်များအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တွေ၏လုပျငနျးစတင်ခဲ့ပြီ, သူမီးထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ယူဆောင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ ဆိုးဆိုးရွားရွား ...
စစ်ရေးယာဉ်များရထားဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပါတယ် loaded 22 / 07 / 2016 ရထားဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပါတယ် loaded စစ်ရေးယာဉ်များ: 15 စစ်ရေးယာဉ်များနေဆဲဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပါတယ် Bilecik အတွက်ဇူလိုင်လအာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရထား၏ညနေပိုင်းတွင်အပေါ်တော့ဘူး။ Fethullah အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ 15 ဇူလိုင်လအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ယာဉ်များညဦးနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်သည်သူ၏ရထား Bilecik အတွက်ရပ်တန့်ခဲ့ပြည့်စေတော်မူ၏။ ဒါဟာရထား Bilecik အတွက်ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုကြုံနေရ 15 ဇူလိုင်လညတူရကီ Mamak အဆိုပါကုန်တင်ရထား Bilecik အတွက်ရဲအဖွဲ့များ၏အမိန့်အားဖြင့်အစိုးရရှေ့နေရဲ့ရုံးကရပ်တန့်ခဲ့တပ်မတော်အားစစ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်မောင်းထုတ်ရန်လမ်း၏အစ္စတန်ဘူလ်ခြေလျင်တပ်မဟာတပ်မှူးအတွက်စက်မှုလယ်ယာ xnumx'inc xnumx'inc ။ အဆိုပါ 28 အတွက်ကုန်တင်ရထားလှည်းစာမေးပွဲဖျော်ဖြေခဲ့။ အစ္စတန်ဘူလ်သှားဖို့ဖြစ်သံချပ်ကာယာဉ်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များရထား ...
Gaziantep ရထားဘူတာများတွင်စစ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များတင်ဆောင်ရထား, 08 / 11 / 2016 စစ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များ, Gaziantep ရထားဘူတာတင်ဆောင်လာသောမီးရထား: ရထားÇankırıကနေတင်ပို့စစ်ရေးမော်တော်ယာဉ်များတင်ဆောင်ပါက Gaziantep ရထားဘူတာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ 28 လှည်းရထားနှင့်အတူစစ်ရေးယာဉ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ပါဝင်ပါသည်ရာ Enhanced သံချပ်ကာဝန်ထမ်းရေးရာ Carriers (GZPT) နှင့်သံချပ်ကာဝန်ထမ်းရေးရာ Carriers (APCs) ၏Çankırıယန္တရားခြေလျင်တပ်မဟာဒုတပ်မှူး, တည်ရှိသော xnumx'inc Gaziantep ရောက်ရှိလာသည်။ ယာဉ်တန်းအတွက်ကားလမ်းအားဖြင့် Sirnak Silopi မြို့မှခေါင်းနှစ်လုံးကားများအနေဖြင့် download လုပ်ဒီနေရာမှာစစ်တပ်ယာဉ်များ။ တူရကီနှင့်Çankırıပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလကနေ 30 1 သံချပ်ကာကားများ 17 ၏ယန္တရားခြေလျင်တပ်မဟာဒုတပ်မှူး xnumx'inc နှစ်ရက်အကြာအောင်မြင်ရန်အထဲက set ယာဉ်တန်းtır'lık ...
ဘားလမ်းရှိ Talan M ကရှိခဲ့
TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးလည်ပတ်KoçbayUşakမြူနီစီပယ် (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
မီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြပွဲ 14-16 ကိုskပြီလ 2020 တွင်အစ်စကစ်ဟီရီတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်
Ulukışlaနှင့် Yenice Stations အကြား 1 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုခိုင်ခံ့စေခြင်း
TCDD မှ Ankara စက်ရုံအရေအတွက်ပြောင်းလဲနေသည်
လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကို Boztepe မှပြန်လည်စတင်သည်
Yenikent Yazidere လမ်းသည်ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လာသည်
အစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာ '' Çemberyol '', '' Çemberray '' နှင့် system နှင့်အတူ '' trans ဆိုတဲ့ '' အဆိုပြုထားဖြေရှင်းချက်
ရုရှားရဲ့ Orenburg မြို့မီးရထားဘူတာရုံ၏သံသရာအတွက်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ပေါက်ကွဲ
Yenimahalle-Şentepeကေဘယ်လ်ကားလိုင်းစမ်းသပ် drive ကိုအဆုံးသတ်သည် 25 ကာလ၌
Ankaray ကောလိပ်ဘူတာ2ရက်ပေါင်းရေလွှမ်း
ရုရှားတွင် Trans-Siberian မီးရထားခဲယမ်းသိုလှောင်ရုံတိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်တံခါးပိတ်ခဲ့ပေါက်ကွဲ
ခဲယမ်းမီးကျောက်ပု Marmaray တူးဖော်ရာမှ လာ. ,
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (266) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)